Eoropa Travel Nandritra ny Lohataona Season | Save A Train
Home > Travel Europe > Eoropa Travel Nandritra ny Lohataona Season
Eoropa Travel Nandritra ny Lohataona Season
Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Spain, Travel Europe
Eoropa Travel tamin'ny volana Aprily dia midika Europe Travel Nandritra ny Lohataona Time! Satria ny ankamaroan'ny Eropa dia lavitra ny ekoatera, indrindra ny malaza tanàna dia mbola somary nangatsiaka tamin'ny Aprily (entana mifanaraka amin'izany). Na izany aza, Eoropa Travel tamin'ny volana Aprily dia mety ho iray amin'ireo tsara indrindra-bolana amin'ny taona ho hitsidika be mpandeha indrindra, ary tanàna malaza indrindra Eto. hafanana dia ampy ho mafana mahafinaritra hizaha, nefa ny vahoaka be habe dia kely noho ny ho hitanao nanomboka tamin'ny May sy Jona. Ity ny lisitry ny toerana hitsidihana ny dia ataonao any Eropa mandritra ny lohataona!
Ity sary ity dia nalaina tany Eoropa Travel Nandritra ny Lohataona, picture am-pilaminana farihy tanàna sy ny rano lalina manga teo hamely ny lemaka amoron-tsiraka ny Nanketo Alpes eto, izay oram-panala-Tsikirity tampon'isa mamorona goavana hilaza izao resahana ao amin'ireo Nosy Borromée; mamitaka Como, tendrombohitra izay mandroboka ho any amin'ny rano lalina sy ny tsara tarehy tanàna mifikitra amin'ny tehezan-tendrombohitra. Ireo karazana toe-javatra ireo ny tsara fanahy amin'ny hitaona ny fanahinareo mba manoratra tononkalo na nahitàna aforeto ho midina alika toerana. Tena Mahagaga fotsiny izany am-pilaminana!
Tsidiho ny faritra tamin'ny Aprily, Lohataona ao anatin'ny Insight Guides ny hilaza Italiana Lakes diany hijanona eo alohan'ny vahoaka.
Milan ho Lake Como Lamasinina
Turin ho Lake Como Lamasinina
Padua ho Lake Como Lamasinina
Venice ho Lake Como Lamasinina
Eoropa Travel Nandritra ny Lohataona in Barcelona / Espaina
Mankalaza ny fiandohan'ny lohataona sy hisambotra ny fiaran-dalamby ho any Barcelona. Fa tsy handray be ny raiki-pitia amin'ny teny espaniola ity tanàna tamin'ny Espaniola ny olona, izay hahatsiaro haka aina sy maka isan'andro siesta – torimaso fohy taorian'ny fisakafoanana antoandro, raha mbola sasatra ny fotsy tora-pasika, mihinana matsiro paella, ary misotro vaovao sangria.
Mandry ao amin'ny faritra Catalonia, mivantana amin'ny Northeastern Mediterane morontsiraka Espaina, Barcelona no tanàna faharoa lehibe indrindra ao Espaina, ary iray amin'ireo malaza indrindra toerana ho an'ny mpandeha any Eoropa Travel Nandritra ny Lohataona. Barcelona dia mahaliana crossover ny mampino an'ireo trano fahiny sy ankehitriny vatosoa famolavolana. Raha toa ianao ka be mpankafy ny Gaudi maritrano, tonga eto raha hijery ny mahasarika Sagrada Família, Casa Batllo, ary Güell Park. Barcelona dia matetika manafana taona rehetra manodidina, ary afaka mitsidika izany mpizaha tany namana tanàna na oviana na oviana ny taona.
In Bruges / Belzika
Aoka ho fantany fa ianao Bruges, Belzika, dia tononina “broozh,” fa maro, ary ny mahery fo amin'ny “In Bruges” ny horonan-tsary, Azo antoka fa tsy. Izy ireo dia lehilahy malaza any Dublin, naniraka tany araka ny mpampiasa tapa-bolana taorian'ny mandeha hira tena ratsy. Ny iray dia tanora Ramoramangotraka izay tsy mahita antony na aiza na aiza, fa ho Dublin; ny hafa, taona, malefaka, liana kokoa, mividy ny boky torolalana sy manambara: “Bruges no tsara indrindra voatahiry Moyen Âge tanàna any Belzika!”
Noho izany tokoa toa. Raha vita ny sarimihetsika na inona na inona hafa, nanentana ny maro ny faniriana maika hitsidika an'i Bruges.
efa nampiasaina dia miavaka roa-ho-iray mandritra ny taona! Lainga eo amin'i Frantsa sy Espaina, ny tanàna kely tsara ho fantatra ny hery miasa mangina mahery ny tanàna roa mitondra, culminating nalaza ratsy labiera ary ny sôkôla. Miaraka amin'ny Paris, Prague, ary Budapest, izany no iray amin'ireo indrindra tantaram-pitiavana tanàna any Eoropa feno lakandrano sy ny antitra trano Moyen Âge.
Bruxelles ho Bruges Lamasinina
Antwerp ho Bruges Lamasinina
Halle roa Bruges Lamasinina
Ghent ho Bruges Lamasinina
Eoropa Travel Nandritra ny lohataona any Cologne / Alemaina
izany 2,000 taona no misy tanàna tany amin'ny faritra andrefan'i Alemaina ary ny faritra ara-kolontsaina lehibe indrindra Hub. Amin'ny Moyen Âge katedraly sy ny mahatalanjona ony hevitra, Cologne dia filan'ny-toerana mendrika. Indrindra ho an'ireo izay te-hitsambikina ho ny kolontsaina sy ny vaovao traikefa vaovao fomba fiaina raha mbola mandeha any Eoropa. Aza adino ny fakantsarinao! Cologne dia malala-tsaina tanàna. Mety tsy dia tsara tarehy izany amin'ny voalohany raha oharina amin'ny tanàna hafa, fa ianao, na mandeha manodidina, dia ho hitanao fa iray amin'ireo tanàna nicest tany Alemaina sy ny tena ao amin'ny lisitra ho an'ny Europe Travel Nandritra ny Lohataona.
The Altstadt (tanana haolo) manana trano tsara be, izay mandry eo am-renirano Rhin. Eo akaikiny fotsiny ilay Cologne Cathedral, ny UNESCO Lova Iraisam-pirenena toerana. Tsy ho very maina ny mananika ao anatin'ny anankiray amin'ireto roa tilikambo.
Cologne dia momba ny rivotra iainana sy ny mponina ao aminy. Ny olona ao an-tanànany Cologne tia. Manana ny fiteniny izy ireo ary vitsivitsy mozika fatorana izay mihira eo an-tanàna ireo fitenim-paritra. Fotoana miborosy ny amin'ny mianatra teny vahiny!
Frankfurt ho any Cologne Lamasinina
Vienna ho any Cologne Lamasinina
Hanover ho any Cologne Lamasinina
Inona no miandry? Maro ireo banky fety fa afaka hanararaotra ka mandehana any Eoropa Travel Nandritra ny Lohataona. Save A Train ihany koa no mahatonga azy faran'izay mora ny boky ny lamasinina tapakila ho toerana ireo na dia iray akory, haingana sy effortlessly!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code) Alemaina
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / nl ny / ru na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#AprilTravel #EuropeinApril #traveleurope europetravel eurotrip lohataona Train Travel travelcologne
Train Travel Austria, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe